ओमकार टाइम्स नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सांसदलाई कस्ले मार्न खोज्यो? पूरा पढ्नुहोस – OMKARTIMES
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सांसदलाई कस्ले मार्न खोज्यो? पूरा पढ्नुहोस
मोरङ। मोरङको क्षेत्र नं. ३ क का प्रदेश सांसद सुयर्माराज राईलाई मेयरको गाडीले ठक्कर दिएको छ । गाडीले ठक्कर दिएको भएता पनि आफुले भागेर ज्यान बचाएको सांसद राईले जानकारी दिएका छन् । राईका अनुसार उनलाई बा १५ च २४३३ नं. को गाडीले ठक्कर दिएको हो ।
राइले टेलिफोन कुराकानीमा भने “बुधबार दिउँसो सवा ३ बजे म नेबेल जाँदै थिएँ । मेरो अगाडी निकैवटा गाडीहरु (कार) थिए । अचानक एउटा कार रोक्यो मैले पनि स्कुटी रोके, यतिकैमा कार ब्याक ग¥यो, मैले हर्न बजाएर, कराँएर पछाडी मान्छे छु भनिरहे तर वास्ता गरेन, म धन्न पछाडीको चक्काबाट साइडलागेँ र बचेँ भनेको फेरी अलिक परबाट त्यही कार म भएठाउँ हुइक्याएर ल्यायो म स्कुटी छाडेर भागेँ र ज्यान बचाएँ, मेरो स्कुटीमा क्षति भएको छ । मैले प्रहरीलाई खबर गरेँ ३,४ घण्टा वित्दा समेत प्रहरीले गाडी र ड्राइभरलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन, मलाई प्रहरीले नै गाडी रंगेली नगरपालिकाका मेयर दिलिप बगडीयाको भएको बताएको छ ।”
यता घटनाको विषयमा एसपी मनोज के.सीसंग बुझ्दा घटना सामान्य भएको बताएका छन् । नोवेलको बाटो अलिक साघुँरो भएको र गाडी ब्याक गर्दा पछाडीबाट स्कुटरमा सामान्य ठोकिएको के.सीले बताए । के.सीले भने “सांसदको गाडीमा ठुलो क्षति भएको छैन्, हामीले अझै यो विषयमा बुझिरहेका छौँ । घटना स्थलमा पुगेर त्यहाँका स्थानीयसंग पनि सोधपुछ गरिएको छ । ट्राफिक प्रहरीले यो विषयमा काम गरिरहेको छ ।”
विशेष गरेर खोला र चुरे दोहनका विषयमा खरो उत्रिएका सांसद हुन् सुयर्मा राई, कतै त्यही विषयको रिसिइबी साँध्नका लागि भएको पो हो की भन्ने शंका लागेको राइले बताएका छन् । घटना पछि गाडी चालकलाई किन यसो गरेको भन्दा उल्टै हप्की दप्की गरेको राईले बताएका छन् । सो गाडीमा चालक संगै अर्की एकजना महिला र एकजना पुरुष पनि रहेको राईले जानकारी दिएका छन् । एउटा मोटरसाइकलले सामान्य ठक्कर दियो भने पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहन्छ भने गाडीले सांसदलाई यो हद सम्म गर्दा पनि नियन्त्रणमा नलिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । राई नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।